Usoro na ọnọdụ - Etourism
Ọnụego niile bụ ọnụahịa Net na enweghị ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ ọnụahịa ụtụ, a ga-agbakwunye ụtụ 10%. Edere ọnụahịa ndị ahụ na ego ụgbọ elu ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ n'oge ịrịọ ya na ọnụego niile dị n'okpuru oge ịmaliteghachi.
E njem nlegharị anya Co., Ltd na-enwe ikike ịgbanwe ọnụ ahịa njegharị ọ bụla nwere ma ọ bụ na-enweghị amamọkwa n'ihi mmụba ọnụego ụlọ nkwari akụ, ọnụ ụzọ ụgbọ elu, ọnụ ahịa njem, na mgbanwe mgbanwe ọnụego. Charkwụ ụgwọ oge elu ga-etinyere ọnụ ahịa njem, ebe obibi, na njem n'ụbochi usoro akara; mgbakọ, ememme, ezumike, ma ọ bụ ngwụsị izu.
A. Nchekwa nchekwa
Dika nkwụnye ego, ekwesịrị ịkwụ ụgwọ 10% nke ngagharị njem n'ime ụbọchị 3 mgbe nkwenye gasị.
B. Ibelata ego
Ekwesịrị ịkwụ ụgwọ Balance otu izu tupu njegharị amalite. Ọ bụrụ na itinye ego na
Akwụghị ụgwọ idozi ego, a ga-akagbuo ndoputa ahụ.
Ọnụego ya ga-adị irè maka otu afọ malite na Mach dị ugbu a ruo Febụwarị afọ ọ gwụla ma enwere ọkwa ọzọ.
A na-anabata ndoputa site na Faksị na Email naanị.
E Tourism Co., Ltd ga-aza Email ma ọ bụ Fak ozugbo enwere ike.
Anyị ga-eme ike anyị niile ị nabata arịrịọ gị dịka ịchọrọ.
A. Ekwesịrị idozi ego ịkwụ ụgwọ zuru ezu na akaụntụ akụ anyị ruo ụbọchị akọwapụtara na akwụkwọ ọnụahịa anyị zitere. Ọ bụrụ n ’eruteghị ụbọchị a kara aka, a ga-ewepụ akwụkwọ ahụ na-akpaghị aka.
B. Ọ bụrụ na iji kaadi akwụ ụgwọ ma ọ bụ Paypal kwụọ ụgwọ, a ga-enwe 5% ụgwọ na ọnụego tarifu.
C. Edere akwụkwọ ego ma ọ bụ akwụkwọ ego onye ego iji zigara anyị ọfịs.
D. A naghị anabata ụlọ ọrụ ma ọ bụ nyocha nkeonwe.
Maka nkagbu nke nhazi enwetara, enwere ike ịkagbu ego iji kagbuo ya.
Agaghị akwụghachi onye njem njem ihe omume ahụ ma ọ bụrụ na onye ahịa kwụsịrị ndoputa ahụ ga-akwụ ụgwọ ụlọ akụ maka nkwụghachi ahụ.
A ga-eji ego iji kagbuo ụlọ ọrụ, klọb, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, ụgbọ elu na ndị ọzọ. A ga-akwụ ụgwọ kagbuo ụgwọ dị ka egosiri n'okpuru.
1) Ozugbo ịkwụ ụgwọ nkwụnye ego: 10% nke ego njem.
2) celkagbu 15 ~ 8days tupu njem ebido amalite: 30% nke ngụkọta njem.
3) celkagbu 7 ~ 3days tupu njem ebido amalite: 50% nke ngụkọta njem.
4) celkagbu 2days tupu ma ọ bụ ụbọchị nlegharị anya emeghere: 100% nke ngụkọta njem.
* Biko mara na anyị abụghị maka ụgwọ ọrụ kompeni 5%.
- Ọbụna maka nkwụghachi 100%, ị gaghị enwe ike ịnweta nkwụghachi maka ego ọrụ kompeni 5%.
E Tourism Co., Ltd anaghị akwụ ụgwọ maka ọnwụ, mmebi, ihe ọghọm, na mgbanwe oge.
Na mgbakwunye, enwere ike ịgbanwe usoro ihe omume maka afọ ojuju ndị ahịa kachasị mma na ma ọ bụ na-enweghị ọkwa ọzọ.
E Tourism Co., Ltd akwadebela ọrụ njem kacha mma na nhazi oge njem.
Imirikiti njegharị dị maka afọ, agbanyeghị na mmemme dị ka Ski, Rafting, Nnụnụ Nnụnụ nwere oke maka oge a kara aka. Njem Panmunjeom anaghị arụ ọrụ na Sọnde ma ememme ndị Korea na USA ma ụbọchị ndị njem na-enye nkwado ahụ site n'aka Onye isi ndị United Nations.
E kweghị ka nwata ahụ gbara afọ 11 sonye na ya. A na-emechi njem DMZ (3rd Tunnel) na Mọnde.
A ga-enye ndị ọrụ Bekee nwere ahụmahụ, German, Chinese, French, Italian, Thai, Spanish, Japanese ma ọ bụ ndị na-asụ Russian ndụmọdụ.
Ọ bụ ebumnuche anyị ịgbaso usoro maka ụbọchị, ọ bụ ezie na enwere nguzo nke ike mgbanwe iji leba anya banyere enweghị nzube ma ọ bụ mmasị ọ bụla ndị ahịa nwere.
N’oge ufodu, n’ihi ihe dị iche iche na-arụ ọrụ, na-abụkarị igbu oge ụgbọ elu na mgbanwe oge ma ọ bụ ebe ngosi ihe mgbe ochie dị nso, enwere ike inwe ntakịrị mgbanwe na nhazi ahụ.
Ndoputa nkwari akụ
Ntughari ime ụlọ niile dabere na ụlọ ọkọlọtọ belụsọ na enwere iwu pụrụ iche.
A ga-edozuga ime ụlọ niile tupu oge ndobe otu ụbọchị agaghị ekwe omume.
Ọ bụrụ na ụlọ ahụ adịghị, aga-edochi ụlọ obibi yiri ya.
Ọdịiche ọ bụla na udi na ọnụ ahịa nwere ike ịdị iche site na nhọrọ gị.
Nleta ngwugwu dabere na mmadụ abụọ n'otu ụlọ.
E Tourism Co., Ltd na-ahazi ụgbọ ala ndị adaba na nchekwa karịa nwere ọkwọ ụgbọala nwere ahụmahụ na-asọpụrụ, nke nwere igwe ikuku na igwe ọkụ.
Uzo eji abanye njem di n’okpuru onodu nile ha kwekoritaworo, n’agbanyeghi, anyi n’enye ndi ahia anyi ugboala ma obu ugbo ala (1-2persons), ugboala (3-8persons), obere ugboala (8-15persons) na ugboala (15-40persons).